Wholesale Pontoon Captains Bucket Boat Seat Manufacture uye Fekitori |XGEAR
Iyo XGEAR pontoon captains bucket boat seat inogadzirwa kubva kumarine-giredhi vinyl, ine yakakwana ergonomics iyo yakagadzirirwa kukwana muviri wako contour zvizere.Zvigaro zvebhaketi zvebhoti zvine furo yepamusoro-density zvinogona kupa rubatsiro rwakanaka.
● Zvigaro zvezvikepe zvekaputeni zvakafukidzwa ne-heavy-duty marine-grade vinyl ine plush foam padding, chigaro chakakora uye macushion ekumashure anopa kunyaradza kunoshamisa, zvinogona kubatsira kuita kuti zuva rako pamvura riwedzere kunakidza.
● The XGEAR boat captain chair yakagadzirwa kubva kune yepamusoro zvinhu zvekusimba uye kusimba, paunogara, iwe unogona kuwana rubatsiro rwakanyanya kuburikidza neyakakwana ergonomically dhizaini ine high impact injection molded plastic frame.
● Inoshanda nepasi rose 5"x 5" kana 5"x 12" inokwirisa bhaudhi pateni, 4 anokwirisa screws uye washers akabatanidzwa.Chigaro chatove nemabhoti maburi uye Kukwirisa kwacho kwakanaka chiyero, iwo anokwirisa screws anosanganisirwa muyuniti.
● Iyi zvigaro zvechikepe chehove inorapwa neUV, inodzivirira mamiriro ekunze uye inodzivirira mildew, inokurumidza kuoma uye nyore kuchenesa.
● Zvigaro zvebhaketi zvezvikepe zvakagadzirirwa mapuranga emuviri wekuwedzera, zvinotaridzika fashoni, zvinogonawo kuwedzera kupenya kwemaitiro uye kunyaradza kuchikepe chako.
● Chiyero chechigaro ndeichi: 19.5"H x 22"L x 21.5"D
Feature Plush furo padding
Item Dimensions 22"W x 21.5"D x 19.5"H
Carton size 23"W x 22.5" D x 20.5"H
CartonGros Weight 9.3KG
Kukwirisa bhaudhi pateni Standard 5"x 5"
Kune akawanda akasiyana mavara esarudzo yako kuti asangane nezvako zvakasiyana zvinoda:
Hunhu, nyaradzo, uye simba zvinogona kuwedzera kusvika pakukosha, uye kukosha chinhu chakakosha kufunga pakusarudza yakanakisa zvigaro zvekugara zvakakunakira.XGEAR zvigaro zvakasiyana-siyana zvezvigaro zvezvikepe uye zvakatokura sarudzo yemamwe magiya emitambo yemvura inopa ruzhinji rwemusanganiswa yechipiri kune imwe.
Sezvatinoziva, kuenzanisa chigaro nechaiyo yekugara Hardware zvakare yakakosha kutariswa mukusarudza kwechigadzirwa.Saka, kungave kusarudza pasuru imwe chete yekugara kana kugadzira yako musanganiswa, Tese tinogona kupa chigadzirwa chakakodzera kuti chisangane nemhando dzakasiyana dzezvido.
Zvakapfuura: XGEAR Yakaderera Seat Yakareruka Kupeta Beach Chair ine Yakakwira Back Mesh Kumashure
Zvinotevera: XGEAR Padded High Back Foldable Camping Chair ine Cup Holder Hard Armrest
Yakaderera Kumashure Boat Seat ine Foldable Backrest
High Back Kupeta Kuredza Boat Seat